'द लिडर'ले नेता जन्माउला ?
पार्वता खनाल गौतम/काठमाडौं, २७ मंसिर । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने सञ्चालक रहने नयाँ टिभी रियालिटी शो ‘द लिडर’को विहीबार एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरियो । कार्यक्रम यसकारण पनि चर्चामा छ कि उक्त कार्यक्रममा नेता छान्ने भूमिकामा सहभागी भएका छन् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की र पूर्वपत्रकार तथा साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र ।
कतिपयले चुनावी प्रक्रियामा सफल हुन नसकेपछि मिश्र र भट्टराईहरु रियालिटी शोतिर नेता खोज्न गएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । खासगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु कार्यक्रमकै विरोधमा उत्रिएका छन् । कतिपयले चेतावनीमुलक ढंगले भने कतिपयले खिस्युट्युरी गर्ने ढंगले आलोचना गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा बाँढिएको छ । कतिपयले पक्षमा, कतिपयले विपक्षमा र कतिपय तटस्थ रहेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
खिरको स्वाद हेरेर हैन, खाएर मात्र थाहा हुन्छ
-पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय
रबि लामिछानेको टिमले संचालन गर्न लागेको ‘द लिडर रियासिटी शो’ बाट नेता त जन्माउने छैन, तर भरपूर नौलो मनोरञ्जनको प्रस्तुति पस्किनुका साथै आधुनिक तीब्र विकसित विश्व प्रतिष्पर्धामाझ अब राजनीतिक नेता के कस्तो गुणका क्षमता भएको हुनुपर्छ ? जनताले कस्ता नेता छान्नुपर्छ ? कस्तालाई सच्चा नेता मान्नुपर्छ ? भन्ने राजनीतिक जनचेतना जगाउने र जनजागरण भने अवश्य ल्याउने छ ।
पैसा पनि कमाईने, व्यावसाय पनि हुने, मनोरञ्जन पनि हुने, माध्यमबाट राजनीतिक नवजागरण ल्याउने प्रयास प्रशंसायोग्य छ । तर खिरको स्वाद हेरेर हैन, खाएर मात्र थाहा लाग्छ ।
बुझि-नबुझी हल्ला गरेर तिल लाई पहाड बनाउने नेपालीको बानी हो । द लिडर कार्यक्रम पनि नेपाल आइडल वा को बन्छ करोडपती जस्तै एउटा रियलिटी टिभी कार्यक्रम हो, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रतिभा भएकाहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् र प्रतिस्पर्धा जित्ने विजयी हुनेछन् । मन परे र फुर्सद भए कार्यक्रम हेरौंला, नत्र यसमा यतिधेरै टीकाटिप्पणी गर्न आवश्यक नै छैन ।
जन्मि पो हाल्छन् कि ?
टाउको गिडेर राजनीतिमा छिरेकाले देश चलाउन हुन्छ भने रियालिटि-शो बाट किन नहुने !!! के थाहा कोहि राजनेता जन्मि पो हाल्छन् कि !!!
मञ्च कसरी गलत हुन्छ ?
‘THE LEADER (यो राष्ट्रको सेवक)’
घोषणाक‌ै क्षणबाट हिट भयो यो रियालिटी शो। Rabi Lamichhane जी र यहाँको ‘दि लिडर’ टिमलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना !
राजनीति तपस्या हो। राजनीति कला पनि हो। कला देखाउने र तपस्याको बाटो सम्झाउने मञ्च कसरी गलत हुन्छ?
नेतृत्व लिने अवसर कसरी पाउँछन् ?
रवि लामिछानेको कार्यक्रम (द लिडर)
यस कार्यक्रमका विजेताले पाउने पुरस्कार …..
१.काठमाडौँमा एक सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट
३. २० लाख नगद
४. राजनीतिमा नेतृत्व लिने अवसर पाउने छन।
मैले नबुझेको कुरा : अरु त पाउलान तर ४ नम्बरको पुरस्कार चैं के वर्तमान नेपालका राजनीतिक पार्टी -नेकपा, कांग्रेस लगाएतले विजेतालाई अध्यक्ष बनाउन रविलाई स्वीकृत दिई सकेछ्न र ?
प्रयोग गर्न दिऊँ
हिजो मेरो छोरी माथी टाईफाईडको भ्याक्सिन परिक्षण प्रयोग गर्दा चुइक्क नबोल्नेहरु : रबी लामिछानेले नेता रियालिटी सो मार्फत खोज्दा खुब चिच्याईरा’ छ्न त ! प्रयोग हो, गर्न देउ न आंखिर प्रयोगशाला न हो ! फेरि तिमीले भोट नहाली संसद हुने होइन क्यारे ! आफ्नै इजार खुस्काइदेलान झैं किन डराउनुपर्‍यो ?
नेता आवश्यकताले जन्माउँछ
नेता आवश्यकताले जसरी पनि जन्माउँछ। कहिले सशस्त्र आन्दोलनले, कहिले शान्तिपुर्ण त कहिले टिभिको रियालिटी शो ले। त्यसका आ-आफ्नै मुल्य-मान्यताहरु होलान। हामी सँधै विरोधको राजनीतिबाट हुर्कियौं र जसले केहि गर्छु भन्छ त्यसलाई आक्रमण गरिहाल्ने, डसिहाल्ने र अराजक र अस्थिरको ट्याग भिराईहाल्ने। रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, धुर्मुस सुन्तली, रमेश सिलवाल, डा. गोविन्द के.सी. हरुको कुनै पनि कामलाई पनि हामीले सहजतापुर्वक लिएनौं । खालि विरोध मात्र। तर जब यिनका काम र नामको गतिले व्यापकता पाउँदै गयो अनि बल्ल हामी बाध्य भएर ए ठिकै रैछ भन्नेमा पुग्छौं।
हामीलाई यस्तो महारोगले गलाएको छ कि स्थापित नेता र मान्छेले बाहेक अरुले केहि गर्नसक्दैन। अहिले नेता आन्दोलनले, आवश्यकताले जन्माउँछ भनेर चर्को कराउने हरु भोलि रवि लामिछानेको कार्यक्रममा सवैभन्दा पहिले पुग्नेछन। यसर्थ हरेक नविनतम योजनालाई गर्वका साथ स्वागत गरौं र त्यसको कामका आधारमा मुल्याङकन गरौं।
थुनिँदै र चुनिँदै आएका छौं
मेकअप गरी, क्यामरामा हेरि, सुटिङमा भुक्ने आदत परेकै छैन । हामी त सडकको धुलोमा लडेर अँध्यारो दुलोमा थुनिदै, जनताबाट चुनिदै आएका छौं ।
‘द लिडर’को विरोध गर्ने अधिकांश सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुको तर्क यो कार्यक्रम सरकारविरोधी कार्यक्रमको रुपमा डिजाइन गरिएको भन्ने छ । सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश मानिसहरुले आफ्नो आवद्धता र बुझाईअनुसार तर्क गरेका छन् ।
हिजो एकसमय नेता बन्न जेल जानुपर्ने, बन्दुक पड्काउनु पर्ने, सडकमा टायर बाल्नुपर्ने क्षमता चाहिन्थ्यो । लोकतन्त्र स्थापनाको उक्त प्रक्रियाहरुमा राजनीतिक नेता वर्गसंघर्षको भट्टीबाट जन्मिन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो ।
तर, मुलुक समृद्धिकरणको युगमा प्रवेश गरेर स्वीकारिसक्दा पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ताले हिजैको क्षमता र योगदानलाई देखाएर राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्दा जनतामा निराशा व्याप्त बनेको छ । किनकी नेताहरुले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यापक निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्षमताले देश विकास गर्न सक्छ ? अबका जमानामा नेता बन्न चाहिने क्षमता के हो ? यसमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न आवश्यक छ । द लिडरले नेता जन्माओस्/नजन्माओस् । सफल होस् वा नहोस् तर नयाँ जमानामा कस्तो नेता चाहिन्छ भनेर बहस गर्ने र आम जनमानसमा नयाँ कौतुहलता पैदा गर्ने काम गर्न सकेमा कार्यक्रमलाई सफल मान्न सकिने आधार सिर्जना हुनेछ ।